Ihe Atụ Talent (Matiu 25:14-30) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS EMEERE NDỊOZI YA IHE ATỤ BANYERE TALENT
Mgbe Jizọs na ndịozi ya anọ ka nọ n’Ugwu Oliv, o meere ha ihe atụ ọzọ. Ụbọchị ole na ole tupu ụbọchị ahụ, bụ́ mgbe ọ nọ na Jeriko, o mere ihe atụ gbasara mkpụrụ ego maịna iji gosi na mgbe Alaeze Chineke ga-abịa ka dị ezigbo anya. Ihe atụ ọ na-aga ime ugbu a yiri nke mkpụrụ ego maịna ahụ. O so n’ihe o ji zaa ndị na-eso ụzọ ya ajụjụ ha jụrụ ya banyere oge ọnụnọ ya na ọgwụgwụ usoro ihe a. Ihe atụ a mere ka ndị na-eso ụzọ ya ghọta na ha kwesịrị ịdị uchu n’ọrụ o nyere ha.
Jizọs malitere ihe atụ ahụ, sị: “Ọ dị nnọọ ka mgbe nwoke nke na-achọ ije mba ọzọ kpọkọtara ndị ohu ya ma nyefee ha ihe ndị o nwere.” (Matiu 25:14) Jizọs ejiribuola onwe ya tụnyere nwoke gara n’ala dị anya “ka ọ gaa nweta ike ọchịchị ma lọta.” N’ihi ya, ndịozi ya ghọtara na ọ bụ Jizọs bụ “nwoke” ahụ ọ na-ekwu okwu ya n’ihe atụ nke ugbu a.—Luk 19:12.
Tupu nwoke ahụ e kwuru okwu ya n’ihe atụ a ejee mba ọzọ, o nyefere ndị ohu ya ihe ndị o nwere. N’afọ atọ na ọkara Jizọs jere ozi n’ụwa, o ji ya kwusaa ozi ọma Alaeze Chineke. Ọ kụzikwaara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eme otú ahụ. Ugbu a ọ na-alaghachi eluigwe, obi siri ya ike na ha ga-anọgide na-eme ihe ndị ọ kụziiri ha.—Matiu 10:7; Luk 10:1, 8, 9; tụlee Jọn 4:38; 14:12.
N’ihe atụ a, olee otú nwoke ahụ si kee ihe ndị o nwere? Jizọs kwuru otú o si kee ya. Ọ sịrị: “O nyere otu onye talent ise, nye onye nke ọzọ abụọ, nyekwa onye nke ọzọ otu, onye ọ bụla dị ka ike ya hà, o wee jee mba ọzọ.” (Matiu 25:15) Olee ihe ndị ohu ahụ ga-eji ihe e nyere ha mee? Hà ga-eji ya zụọrọ nna ha ukwu ahịa ma ritere ya uru? Jizọs gwara ndịozi ya, sị:
“Ozugbo ahụ, onye natara talent ise gara jiri ya zụọ ahịa ma rite ise ọzọ n’uru. Otú ahụkwa, onye natara abụọ ritere abụọ ọzọ n’uru. Ma onye natara naanị otu gara gwuo ala zoo ego ọlaọcha nke nna ya ukwu.” (Matiu 25:16-18) Olee ihe ga-eme mgbe nna ha ukwu ga-alọta?
Jizọs kwuru, sị: “Mgbe ogologo oge gasịrị, nna ukwu nke ndị ohu ahụ lọtara, ya na ha wee mee mpịazi.” (Matiu 25:19) Ndị ohu ya abụọ zụụrụ nna ha ukwu ahịa otú ha nwere ike, “onye ọ bụla dị ka ike ya hà.” Ha abụọ dị ike ọrụ ma jiri talent ahụ e nyere ha rite uru. Onye nke e nyere talent ise ritere talent ise n’uru. Onye nke e nyere talent abụọ ritekwara talent abụọ n’uru. (N’oge ahụ, ọ ga-ewe onye ọrụ afọ iri na itoolu iji rụta ego ole ya na otu talent hà.) Ihe nna ha ukwu gwara ohu ya nke mbụ ka ọ gwakwara ohu ya nke abụọ. Ọ sịrị onye nke ọ bụla n’ime ha: “I mere nke ọma, ezi ohu kwesịrị ntụkwasị obi! I kwesịrị ntụkwasị obi n’ilekọta ihe ole na ole. M ga-eme gị onye na-elekọta ọtụtụ ihe. Soro nna gị ukwu ṅụrịa ọṅụ.”—Matiu 25:21.
Ma egwú dagharịrị mgbe e rutere n’ohu ahụ e nyere otu talent. Ohu ahụ gwara nna ya ukwu, sị: “Nna m ukwu, amaara m na ị bụ onye aka ike, nke na-aghọrọ mkpụrụ n’ebe ọ na-akụghị mkpụrụ, onye na-ekpokọtakwa mkpụrụ n’ebe ọ na-afụchaghị mkpụrụ. Ya mere, atụrụ m egwu, m wee gaa zoo talent gị n’ala. Wekwara ihe gị.” (Matiu 25:24, 25) Ohu a etinyedịghị ego ahụ n’ụlọ akụ̀ ka nna ya ukwu nwetatụ uru. Ọ chọtụdịghị ihe ga-abara nna ya ukwu uru.
N’ihi ya, nna ya ukwu kpọrọ ya “ajọ ohu dị umengwụ.” A naara ya talent ahụ e nyere ya, were nye ohu ga-eji ya zụọ ahịa. Nna ya ukwu kwuziri, sị: “Onye ọ bụla nke nwere, a ga-enyekwu ya, ọ ga-enwekwa ihe n’ụba; ma onye nke na-enweghị, a ga-anapụ ya ọbụna ihe o nwere.”—Matiu 25:26, 29.
Ndị na-eso ụzọ Jizọs enweela ọtụtụ ihe ha ga-eche gbasara ha. Ihe atụ a Jizọs mere sokwa na ha. Ihe atụ a mere ka ha ghọta na ihe Jizọs na-enyefe ha, ya bụ, ọrụ ime ka ndị mmadụ bụrụ ndị na-eso ụzọ ya, dị ezigbo mkpa. Ọ chọkwara ka ha dị uchu n’ọrụ a. Jizọs enweghị mgbe ọ tụrụ anya na ihe onye ọ bụla ga-arụ n’ọrụ a o nyere ha ga-aha nhata. Dị ka ihe atụ a o mere na-egosi, onye ọ bụla kwesịrị ime “dị ka ike ya hà.” Ma nke a apụtaghị na obi ga-adị Jizọs mma ma mmadụ dịrị “umengwụ” ma ghara ime ike ya niile iji ritere Nna ya ukwu uru.
Ọ ga-abụ na obi tọrọ ndịozi Jizọs ezigbo ụtọ mgbe Jizọs gwara ha okwu a kasiri ha obi. Ọ sịrị ha: “Onye ọ bụla nke nwere, a ga-enyekwu ya.”
N’ihe atụ Jizọs mere banyere talent ndị ahụ, ònye bụ nna ukwu ahụ, ole ndị bụ ndị ohu ahụ?
Gịnị na gịnị ka Jizọs ji ihe atụ a kụziere ndị na-eso ụzọ ya?
Mụta Ihe n’Ilu Jizọs Tụrụ Banyere Talent
Isiokwu a mere ka anyị ghọtakwuo ilu Jizọs tụrụ banyere talent.